စတိဗ်ဘီကို - အနက်ရောင်သိစိတ် - Afrikhepri Fondation
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 27, 2021
စတိဗ် Biko, အက Black သိစိတ်ကို
Le ၁၉၇၇၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၃၁ နှစ်အရွယ်တွင် Steve Biko သည် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာကြောင့် Pretoria (တောင်အာဖရိက) အလယ်ပိုင်းအကျဉ်းထောင်တစ်ခုတည်းတွင်တစ်ယောက်တည်းသေဆုံးခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာများနှင့်အနာများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်မြေပြင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသည့်သူ၏အလောင်းကိုသူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်သူဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာ Donald Woods (၁၉၇၉) တွင်အပြည့်စုံဆုံးအတ္ထုပ္ပတ္တိ (စာရေးသူ) ကိုရေးသားခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်သူသည်နေရင်းမြို့အနီးရှိ Port Elisabeth တွင်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး Biko သည်နှင်ထုတ်ခြင်းခံရပြီးနောက်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်နေခဲ့ရသည်။ Biko သည်မြို့တော်လုံခြုံရေးရဲ ၀ န်းကျင်သို့ခေါ်ဆောင်ခံရပြီးသူ၏ဌာနချုပ်တွင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ ကြိမ်ဖန်များစွာရိုက်နှက်ခြင်း၊ သံကြိုးနှင့်လုံး ၀ သုတ်ခြင်း၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်ဟုဆရာဝန်များကဆရာဝန်များက "မတော်တဆကျဆုံးခြင်း" ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ "အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိမှုများ" ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်အစီရင်ခံစာကိုနောက်ပိုင်းတွင်အာဏာပိုင်များကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ ကွာဝေးသည့် Pretoria ရှိရဲကိုရဲကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စတိဗ်ဘီကိုသည်အပျော်စီးနေသည့်ဂျစ်ကားနောက်ဘက်ရှိကြမ်းပြင်ပေါ်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ သူသေဆုံးသည်မှာအာဏာပိုင်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းရှစ်ခုအထိစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
လူမည်းအသိစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခေါင်းဆောင်သည်တောင်အာဖရိက၏အာဇာနည်ကြီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောအသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်သောသင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ကျော်ကြားမှုသည်ထိုအချိန်ကနယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားထက် ကျော်လွန်၍ အနောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အာဖရိကအမျိုးသားကွန်ဂရက် (ANC) နှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ မာက်စ်ဝါဒီ "ဒါမှမဟုတ်ပင်" လိုလားသူဆိုဗီယက် "သိသာထင်ရှားစွာလျှော့ချစစ်အေးတိုက်ပွဲတပ်ဖွဲ့များခဲ့, နှောင်းပိုင်း 1980 နှစ်ပေါင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိုင်ကွန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသူကိုယောက်ျား၏လွတ်မြောက်မှုကိုများအတွက်ဥရောပနှင့်ပင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စက်ဝိုင်း ANC ကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှည့်တဲ့သူ။
1946 Ginsberg တှငျမှေးဖှားတစ်ဦး မြို့နယ် စတီဖင်ဘန်တူဘိုင်ကိုသည်ဝီလျံဘုရင်၏မြို့တော် (အရှေ့ကိပ်) နားတွင်အနက်ရောင်ဆန့်ကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ကစစ်သွေးကြွစဉ်တွင်သူ၏ဖခင် Mzimkhayi အားဖြူရဲရဲမှသတ်ဖြတ်ခဲ့သည် Biko သည်အလယ်တန်းကျောင်းမှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံရသဖြင့် Biko သည်သူ၏ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလက်နက်များကိုဒူဘန်တက္ကသိုလ်၌ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Non-ဥရောပ ဆေးပညာဌာနမှ။ အစပိုင်းတွင်အဖြူလစ်ဘရယ်များတည်ထောင်ထားသောကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ တောင်အာဖရိကကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (Nusas) တွင် Biko သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်အခြားအနက်ရောင်ကျောင်းသားများနှင့်အတူတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း (SASO)၊ ဦး ခေါင်း အဖြူရောင်အဖေဘက်ကဝေဖန်မှု၊ လူမည်းတွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏အသိပညာကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်းသည်သူ၏ဟောပြောချက်၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကြမ်းမဖက်သောလူမည်းလှုပ်ရှားမှုကမှုတ်သွင်းခံထားရပြီးခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဲ့သို့ပင်အနက်ရောင်သတိသည်ငယ်ရွယ်သောလူအများစုအပေါ်အနိုင်ယူပြီးသူတို့၏စာဖတ်ခြင်းမရှိသော ANC ရဲဘော်များထက် ပို၍ အစွန်းရောက်ခဲ့သည်။ ပtheိပက္ခ၏တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးရေးသဘောသဘာဝကသူတို့ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပုံရသည်။ သို့သော်လည်း Black Consciousness Movement (BCM) ဖြစ်လာသည့်အရာသည်၎င်း၏အကြမ်းမဖက်သောအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးစီမံကိန်းများမှတဆင့်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကိုကျော်လွှားရန်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူဟာအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကို ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်။ « Black ကသိစိတ်ကို၏အခြေခံနိယာမသူ့ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွက်လူစိမ်းစေလိုသည်နှင့်သူ၏လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအထိဖျက်ဆီးသောတန်ဖိုးကိုစနစ်၏အနက်ရောင်ယောက်ျားသည်အားဖြင့်ငြင်းပယ်ခံရဖြစ်ပါသည် » Biko 1976 အတွက်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းက 1971 အတွက်ကိပ်တောင်းထဲမှာမိန့်ခွန်းမှာသူကဖြန့်ချိ: « အဆိုပါညှဉ်းဆဲတတ်သော၏လက်၌အာဏာအရှိဆုံးသောလက်နက်တို့သည်အဖိနှိပ်ခံများ၏စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ် ! ». « စတင်အဘို့, သူကဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာရှင်းပြ, လူဖြူများသည်လူသာဖြစ်ကြောင်း၊ လူသာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ရန်လိုသည် ထိုနည်းတူစွာလူမည်းများသည်၎င်းတို့လည်းလူသားမဟုတ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ရမည်... »
သို့သော်အာဖရိကန်ဝါဒ၏အယူဝါဒသည်အစဉ်အလာအာဖရိကစံနှုန်းများကိုအဓိကထားပြောဆိုခြင်း၊ အာဖရိကန်လက္ခဏာကိုဗဟိုပြုသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အာဖရိကန်များအားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်စည်းရုံးခြင်း (Azania) ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည့် PAC နှင့်မတူဘဲဘီကိုဘီစီ BCM ကမျှော်မှန်းသည်။ ရေရှည် - လူမည်းအများစုသည်လူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်သမိုင်းမှတစ်ဆင့်ထိုက်တန်သော ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္assumedကိုသေချာပေါက်ရယူနိုင်မည့်ပြည်နယ်ဖြစ်သော်လည်းလူမျိုးရေးမဆန်သောနိုင်ငံရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ Lucid ။ သူမသေဆုံးမီသုံးလအလိုတွင်သူကကြေငြာခဲ့သည် - « သငျသညျအသကျရှငျနဲ့မာနထောင်လွှားနေဒါမှမဟုတ်သင်သေကြ, သင်သေလွန်သောသူတို့သည်အနေဖြင့်အခါ, သင်စိတ်ပူစရာမနိုင်ဖြစ်စေ။ သင်သည်သေလမ်းကိုကိုယ်နှိုက်ကနိုင်ငံရေးအရာရှိနိုင်ပါသည် ( ... ) ငါအသားအရောင်ခွဲခြားတောင်တော်ရုတ်သိမ်းပေးရန်အသက်တာ၌ပျက်ကွက်လျှင်, သေမင်း၏ထိတ်လန့်အကယ်စင်စစ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းမူကား, »
သူ၏သတ္တိရှိရှိလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုသည်ထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒေါသကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် Soweto ပုန်ကန်မှုကိုသွေးထွက်သံယိုဖိနှိပ်မှုအပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီသည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ဆို့မှုအားပိုမိုအားကောင်းစေခဲ့သည်။ မင်ဒဲလားသည် ၁၉၉၄ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ပြောကြားခဲ့သည် « Biko အသားအရောင်ခွဲခြားရေး၏ခေါင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးလက်သည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ »
Par သြဂတ် Conchiglia
SOURCE မှ: https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-09-11-Steve-Biko-la-conscience-noire
Black Consciousness: တောင်အာဖရိကမှစာများ၊ ၁၉၆၉-၁၉၇၇
€6ကနေ 17,00 အသစ်
4 12,61 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 17,00 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 27, 2021 11:30 pm တွင် updated
သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်ပါ - ဂျိုးဇက်မာဖီ (အသံ)
ကုသမှုအတည်ပြုချက်များ - AUM (အသံ)
ယုံကြည်မှုစွမ်းအား - Brian Tracy (အသံ)
သေလွန်သူများစာအုပ် - Samaël Aun Weor